Rehefa mangarahara ny fananana entana - TELES RELAY
Rehefa mangarahara ny fangaraharana
By TELES RELAY On Aogositra 10, 2020
Rehefa niditra ny antsasaky ny ampahefatry ny ampahefatry ny taona 2020 ity, ny tontolon'ny asa dia tsy mbola nahazo ny fientanam-be toy izany, ary nandroaka ireo vinavina rehetra tamin'ny taona maizina indrindra teo amin'ny toekarena manerantany. Teo anelanelan'ny krizy ara-toekarena sy ny krizy ara-pahasalamana, ny ankamaroan'ny orinasa dia nandamina ny fomba fitantanany manoloana ny tsena goavambe. Eto amin'ity tontolo iainana ity ny tanora nahazo diplaoma na ireo nitady asa dia tsy maintsy mampiseho fahaiza-miaina mba hisintonana ny sain'ireo mpiasa nahazo CV izay betsaka noho ny mahazatra. Ahoana ny fomba hivoahana sy fampiroboroboana io fanampiny kely io izay hitondra fiovana?
Fenoy taratasy amin'ny vitaminina
Mihoatra noho ny fanazaran-tena mahazatra, ny taratasinao dia ny fifandraisana voalohany eo amin'ny orinasa sy ny mpikarakara ny asa. Izy io dia manome tanjaka ny zava-drehetra izay tsy hain'ny CV dieny mihoatra ny ambaratonga matihaninao na ny fianarana. Izy io dia miantoka ny toeranao, mandika ny soatoavina notadiavin'ny mpitam-baovao nampahafantatra. Ny endriny dia mitaky fahazoana manokana izay mahatonga anao ho tsy manam-paharoa amin'ny mombamomba izay mifanentana amin'ny toerana misy anao. Tsy resaka firesahana fotsiny momba ny fahatakaranao ny tsena izay iasan'ny orinasa lasibatra, fa mihoatra lavitra izany: mizara ny fahitany, mahalala ny ADN.
Fa maninona no mifampiresaka amin'ny tantara Facebook sy Instagram?
Ny fitarihan'ny vehivavy: Elizabeth Tchoungui na fahaterahana indray eo ambanin'ny ...
Seranana, lozisialy… Ao Dijbouti, tsy ho ela ny faran'ny fampandrosoana “…
Ny fahitana ny marika kendrena
Na dia betsaka aza ny orinasam-pifandraisana mifampiresaka amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny sehatra voatokana na ny tontolo iainana azy, dia misy ny fifandraisana eo amin'ny lalana ahafahan'ny mpitady asa hahita fahalalana tsara kokoa amin'ireo marika marihina, toy ny GoWork.fr. Loham-baovao iray azo antoka momba ny mpampiasa, GoWork.fr dia manome voninahitra ny mpiasa izay manana fizarana traikefa dia mamela ny mpikaroka momba ny asa hahafantatra bebe kokoa momba ireo orinasa ampiharany ao amin'ny faritra misy azy ireo. Fanamarihana eo ambanin'ny tombo-kase tsy mitonona anarana izay mahatonga ny fahasamihafana ary mampiseho ny orinasa amin'ny fomba hafa. GoWork.fr no ivon-toerana voalohany ho an'ny fampivondronana ny fitantanana sy ny mpiasa, amin'ny farany manome alalana ny fampahalalana hanome sakafo ho fanatsarana ny vokatra sy ny asa. Miseho amin'ny kontinanta enina, ity vavahadin-tserasera ity dia manokatra ny varavarana amin'ny vanim-potoana vaovao amin'ny fiainan'ny orinasa noho ny fangaraharana nataon'ny tsikera avy amin'ny mpiasa an'arivony monina any Frantsa.
Fifaninanana mendrika kokoa natao
Ny talenta avy amin'ny faritra Corse, de l 'Occitanie ou Great East manao izay hiveloman'ny faritra samy hafa izy ireo, tsy amin'ny hazakazaka mahatsiravina ho an'ny eritreritra fa mihoatra noho ny famoronana manodidina ny zavatra niainany ho fanangonana fampahalalana tsara hahafahana mahatakatra bebe kokoa ny fanamby hatrehan'ny mpitady asa. Noho izany, ny dikan-tsarin'ny frantsay an'ny GoWork.fr dia manome fidirana amin'ny fampahalalana lehibe amin'ny fotoanan'ny krizy ara-toekarena raha toa ka manantena ny fanarenana tsikelikely ny fanantenana rehetra. Makà hevitra momba ny mpampiasa anao amin'ny alàlan'ny fanangonana ny fototry ny fizotran'izy ireo noho ny votoaty omen'ireo izay ho mpiara-miasa aminao rahampitso. Ny tontolo vaovao dia azo antoka fa manokatra anao ary miankina aminao ny hahafantatra hoe ahoana ny hahatongavana any. Asio fandehanana, misafidy ny tontolo akaiky anao, vonona ary handeha.
TELES RELAY 26501 Lahatsoratra 1 hevitra
Filan-kevitry ny mpitsara tsara indrindra: Lahateny feno nataon'ny Lohan'ny Fanjakana
Rosia: Clinton Njié manomboka tsara amin'ny fotoany
Ny fitarihan'ny vehivavy: Elizabeth Tchoungui na fahaterahana indray ao anatin'ny orana "voasary" ...
Seranana, lozisialy… Ao Dijbouti, ho tapitra tsy ho ela ve ny faran'ny fampandrosoana "kendrena hipetraka"? - ...
Adobe Flash Player faran'ny fifandonana: ahoana no fanesorana azy? - Torohevitra
Bertrand Cantat dia niatrika ny rariny indray - Lahatsary
Bertrand Cantat: ny vadiny taloha namono tena, nanameloka ny ...
Misy ifandraisany amin'ny fahafatesan'ny iray hafa aminy ve i Bertrand Cantat…
Prev Manaraka 1 amin'ny 35